Honda ရဲ့ 1,200 hp ပမာဏနဲ့ မယုံနိုင် လောက်စရာ စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့ Toyota MR2! – MyMedia Myanmar
Honda ရဲ့ 1,200 hp ပမာဏနဲ့ မယုံနိုင် လောက်စရာ စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့ Toyota MR2!
ကား အတော်များများ ကတော့ Toyota ရဲ့ MR2ကား အကြောင်းကို အတော်လေးစိတ်ဝင်တစား ရှိခဲ့ ဖူးကြပါ တယ်။ လမ်းပေါ်မှာ မောင်းနှင်နိုင်မယ့် ကား အကောင်းစားတွေထဲမှာ တစ်စီး အပါအဝင် အဖြစ် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဖန်တီး တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Mid-Engine Coupe ကား အမျိုးအစား ဟာ ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၈၀ ခုနှစ်များဆီက ပေါ် ထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ သက်တမ်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုအချိန်ထိတော့ လမ်းမထက်မှာ M2အမျိုးအစားတွေကို မြင်တွေ့နေရဆဲဖြစ်ကာ သူတို့ ထဲက ကားအတော်များများ ကလည်း မယုံနိုင်လောက်စရာကို Tuning ပြန်လည် ပြုလုပ်ထားကြတာ တွေ့ရမှာပါ။ အခုလိုမျိုး အကောင်းဆုံး ဆက်လက်ရှင်သန် နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ MR2တွေထဲက အခုမြင်တွေ့ရမယ့် တစ်စီးကတော့ ဒုတိယမြောက်မျိုးဆက် W20 ဆိုတဲ့ မီးခိုးရောင် ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျယ်ဝန်းတဲ့ Drag Radials တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Drag Strips တွေအတွက် ရည်ရွယ် ဖန်တီးထားတဲ့ ကားတစ်စီးဆိုတာတော့ အတော်လေးသိသာနေပါတယ်။
အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ That Racing Channel ထဲက Video တစ်ခုမှာတော့ Josh ဆိုသူ တစ်ယောက်က ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဆိုပါကားကို ထူးထူးခြားခြား တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပြီး ကားရဲ့ ထိုင်ခုံတွေ အနောက်မှာ လည်း ဘာမှန်းသေချာ မသိရ တဲ့ အရာတစ်ခုကို သယ်ဆောင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Josh ရဲ့ အဆိုပါ MR2ကားလေး ဟာ Honda ရဲ့ K 20 Power Plant နဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကအကုန် မဟုတ်သေးပါဘူး ၊ PSI ပေါင်း 50 ကျော် နဲ့လည်း Boost ပြန်လည် ပြုလုပ်ထားသေးတာကြောင့် နောက်ဆုံးထွက် ပေါ်လာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ မယုံနိုင်လောက်စရာ အခြေအနေနဲ့အတူ 1,200 hp ( 895 kW) အထိကို ရှိခဲ့တာ ပါ။ ယခင်ဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ MR2အနေနဲ့ Drag Strips တွေ အတွက် အဓိက ဖန်တီးထားခဲ့တာ ဖြစ်လို့ ဒီ Video ထဲ မှာလည်း အဆိုပါ အချက်ကလည်း အဓိက ပါဝင်နေခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ အခုကားကို ဖန်တီးပြီး စမ်းသပ်ရတဲ့ ပထမဆုံး အဓိက ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုကတော့ တစ်မိုင် ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ ပမာဏ လောက်ကိုပဲ ဘယ်လောက် အမြန် နှုန်းနဲ့ မောင်းနှင်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို စမ်းသပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကာ အထူးသဖြင့်တော့ ၈ စက္ကန့် ပမာဏကို စံသတ်မှတ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး အကြိမ် စမ်းသပ် မောင်းနှင်မှု ကတည်းကအောင်မြင်လုနီးနီး ဖြစ်ခဲ့ပြီး တစ်မိုင်ရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံကို ၈.၉၉ စက္ကန့် နဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒုတိယ အကြိမ် မောင်းနှင်မှုကတော့ တကယ့်ကို ပိုမို ကောင်းမွန်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး Honda ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ အတူ အဆိုပါကား ဟာ ၈.၈၇ စက္ကန့် အတွင်းမှာတင်ပဲ တစ်နာရီကို ၁၇၆.၃၀ မိုင် နှုန်း ( ၂၈၄ ကီလိုမီတာ ) ပမာဏ အထိကို မောင်းနှင် ပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ ကား အနေနဲ့ နောက်ထပ် ကောင်းမွန်တဲ့ စံချိန် တစ်ရပ် အ‌ဖြစ် ၂.၅၆ စက္ကန့် အတွင်းမှာ တင် ၀ ကနေ ၆၀ မိုင်နှုန်း ( 97 km/h ) ကို ရရှိအောင် လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာ ပါပဲ။
အဆိုပါ နှုန်းထားကတော့ လတ်တလော ‌အချို့သော Supercar တွေထက် တောင် ပိုပြီး မြန်ဆန် နေတဲ့ ပမာဏပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး ၊နောက်‌ဆုံး တစ်ခေါက် စွမ်းဆောင်ရည်က ပိုလို့တောင် ကောင်းမွန် နေပါသေး တယ်။ တစ်မိုင်ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံကို မောင်းနှင်ရာမှာ ၈.၇၈၅ စက္ကန့် လောက်ပဲ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး အမြင့်ဆုံး အနေနဲ့လည်း 180.60 mph (290.6 km/h) အထိ ရှိခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ အခု MR2က အမြန်ဆုံးတောင်မဟုတ်သေးပါ ဘူး။ အခြားသော Kyle ဆိုတဲ့ Video တစ်ခု မှာဆိုရင် အဆိုပါ ခရီးပမာဏ ကိုပဲ ၈.၅ စက္ကန့်နဲ့ ဖြစ်အောင် မောင်းနှင် ပြခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Mid-Engine Toyota တစ်စီးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ လားလားမှ မသက်ဆိုင်တော့သလိုကို စွမ်း ဆောင် ပြလိုက်တာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အခုလို အံ့အားသင့်ဖွယ် Video နှစ်ခုအကြားမှာ ဝေခွဲမရပဲ ဖြစ်နေမှာ ကတော့ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
The post Honda ရဲ့ 1,200 hp ပမာဏနဲ့ မယုံနိုင် လောက်စရာ စွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့ Toyota MR2! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-05T20:40:20+06:30January 5th, 2021|MYCARS MYANMAR|